प्रधानमन्त्री ओ लि को जन्मदिन बालुवाटार मा मनाइयो
Monday, 22 Feb, 2021
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आफ्नो ७०औं जन्मदिन मनाउनु भएको छ । उहालाई जन्मदिनको शुभकामना विहानैबाट दिनेको उल्लेख्य सहभागीता छ । कतिपयले भेटेर त कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा बिहानैदेखि उहालाई शुभकामनाको वर्षा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिनको कुनै औपचारिक कार्यक्रम नराखेपनि प्रधानमन्त्री निवासमै पारिवारिक रुपमा जन्मदिन मनाउनु भएको छ । उहाले नेवारी सस्कृतिअनुसार जन्मदिनको सगुन लिनु भएको छ । पिता मोहनप्रसाद ओलीले टिका र माला लगाई शुभकामना समेत दिनुभएको छ ।
२००८ साल फागुन ११ गते शनिबार तेह्रथुम जिल्लाको इवा गाउँमा बाबु मोहनप्रसाद ओली र आमा स्व. मधु ओलीको पहिलो सन्तानका रुपमा उनी जन्मेका थिए । ओलीका बुवा मोहनप्रसाद अहिले ९१ वर्षमा हिंडिरहेका छन् । आमालाई भने उनले सानै उमेरमा गुमाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओ लि को ७० औं जन्मदिन बालुवाटार मा मनाइयो
आफैले अध्यन गरेको बिधालय का बिद्यार्थी लाइ स्टेसनरी लगेर पुगिन जमुना अधिकारी जि सी
रास्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण बुटवल संग समन्वय गरेर अर्घाखाँचीमा जमुना अधिकारीले जि . सी बाट स्टेसनरी वितरण
प्रधानमन्त्री ले उद्द्घाटन गरेको नेपाल दोस्रो लामो राप्ती नदि को पुल शिला तोडफोड स्थानीय आक्रोशित
आउदो चुनाव को लागि अन्तरिक तयारी पुरा भयो फागुन २१ गते मतदाता नामवली प्रकाशन निर्वाचन आयोग
विश्व सुख शान्ति बौद्ध विहारको शान तिलोत्तमा नगरको पहिचान
संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर, १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
पाल्पा दाड्डसिघामा होमस्टे संचालन गरि गाउँका उत्पादनलाई गाउँमै खपत गर्ने सोंच
आप्रवासी परिवार हकहित मञ्चका पदाधिकारी र बैदेशिक रोजगार संग सम्बन्धि परिवारका लागि दुई दिवशिय क्षमता अभिवृद्धि तालिम सुरु,
शेयर सदस्यको उपचारमा एकता सहकारीको आर्थिक सहयोग
रुपन्देहीमा पुरुषद्वारा पुरुष माथि बलात्कार